काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अबको समय प्रिजेन्स र क्वालिटीको भएको बताएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पत्र...
सरकारले सिमा विवाद समाधान गर्छ: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सिमा विवाद समाधान गर्ने ठुकुवा गरेका छन । भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमी भएको भन्दै ...
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका चार पक्राउ
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका रुकुमपूर्वका चार जना साढे ८ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । उनीहरु चारै जनालाई शुक्रबार भुमे गाउँपालिका–४ को काँडास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा भ...
ट्रककोे ठक्करबाट एकको मृत्यु
भरतपुर महानगरपालिका–२९ दासढुङ्गामा आइतबार बिहान ट्रककोे ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नाम, थर र ठेगाना नखुलेका अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।...
सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ताको प्रस्ताव
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा भुभाग समेटिएको विरोध गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । यसै साता पठाइएको पत्रमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति नेपालको असन्...
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय नै आफू नभएको बेलामा हेरफेर गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको समाजवादी पार्टीले सरकार तत्काल नछाड्ने जनाएको छ । समाजवादी...
देउवाको आरोप : ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद 'झुटो' भएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले...
परराष्ट्रमन्त्री आज रुस जाँदै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रुस र सर्बियाको एक साता लामो भ्रमणमा जाने भएका छन् । मन्त्री ज्ञवाली नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आज दिउँसाे ४ बजेपछि रुस प्रस्थान गर्ने छन्। भ्रम...
काठमाडौं । सभामुख नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिल...
अकुपाई टुँडिखेल : आज साहित्यकारहरुद्वारा रचनात्मक विरोध
काठमाडौं । अकुपाई टुँडिखेल अभियानको तेस्रो साता अन्तर्गत आज(शनिबार) साहित्यिक जमघट हुँदै छ । अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठले जानकारी दिएअनुसार आज विभिन्न साहित्यकारहरुले रचनात्मक ढंगले विरोध जनाउने छन्...
नेयमार फर्किएको खेलमा पीएसजीको जीत
एजेन्सी । फुटबल सुपरस्टार नेयमार डेढ महिना पछि फर्किएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले बलियो प्रतिद्वन्द्वी लिलेमाथि सहज जित निकालेको छ । घरेलु मैदानमा शुक्रबार राति भएको खेलमा पीएसजीले लिलेलाई २–० ...
काठमाडौं । सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को शुभारम्भ ५० औं हजार जनसमुदायको बीचमा गर्ने घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी जनवरी १ मा काठमाडौंमा ५० औं हजार जनसमुदायबीच सो भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरिने संस्कृति...
१० वर्षमा १४ स्वास्थ्यमन्त्री, उपलब्धि निराशाजनक
पछिल्लो १० वर्षयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ जना स्वास्थ्यमन्त्री पाए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयले दैनिक काम सञ्चालन गरे पनि जनताको मन जित्ने कार्यक्रम प्...
नेपालमा चर्को विवाद भएपछि भारतले नक्सा तत्काल संशोधन गर्दै अर्को भ्रम छरेको छ। कात्तिक १५ गते जारी नक्सामा काली नदी भारतमा प्रस्ट देखिएपछि विवाद बढेको थियो। यो साता बनाएको अर्को नक्सामा काली नदी त्यही...
अब के गर्लान् उपेन्द्र यादव ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोध्दै नसोधी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका यादव आक्रोशित हुँदै शुक्रबार फर्किए...
काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण : हरेक वर्ष जान्छ, १० हजारको ज्यान
उपत्यकामा जाडो यामको सदावहार विशेषता हो–बढ्दो वायू प्रदूषण । यो समयमा जसरी तापक्रम विस्तारै घट्दै जान्छ त्यसको ठिक उल्टो धुवाँ र धुलोले प्रदूषण मापनको आँकडा बढाउँदै लग्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा विगत द...
गत आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कम विदेशी लगानी भित्रिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा भने यसको प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार देखिएको छ । लगानी रकमका हिसाबले चालू आवको तीन महिनाभित्रै नेपालले करिब चार अर्ब रुपिय...
भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले ३५ दिन भित्र अन्तराष्ट्रिय अदालतमा नगए भारतले मिचेको सिमाका बिषय जटिल बन्ने बताएका छन । उनले सरकारले भारतले मिचेको सिमाका बिषयमा सरक...
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २४ प्रतिशत घर बन्दैछन् । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टीसँग तत्काल पार्टी एकिकरणको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन । अध्यक्ष महतोले शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँ...